घट्यो खाने तेलको मूल्य, लिटरमा कति घट्यो ? – Annapurna Post News
घट्यो खाने तेलको मूल्य, लिटरमा कति घट्यो ?
June 17, 2022 sujaLeaveaComment on घट्यो खाने तेलको मूल्य, लिटरमा कति घट्यो ?
बजारमा खाने तेलको मूल्य घटेको छ । रुस–युक्रेन यु द्धका कारण महँगिएको खानेतेल लिटरमै ३० रुपैयाँसम्म मूल्य घटेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्न थालेपछि यहाँ मूल्य घटेको बताइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खानेतेलको कच्चा पदार्थको मूल्य १० प्रतिशतसम्म घटेको छ भने एक महिना अघि सूर्यमुखी तेल कार्टुनमा ३३ सय देखि ३५ सय रुपैयाँ थियो।
अहिले यो घटेर ३ हजारदेखि ३२ सय रुपैयाँमा आएको छ। भटमासको तेल कार्टुनको तीन हजार रुपैयाँदेखि ३२ सय रुपैयाँसम्म थियो। यो घटेर अहिले २८ सय रुपैयाँदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म आइपुगेको छ। सूर्यमुखी तेलको मूल्य लिटरको २ सय ८० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ। एक महिना अघि यो तेलको मूल्य लिटरको ३ सय १० रुपैयाँ थियो। केही समय अघिदेखि खाने तेलको मूल्य अस्वभाविक रुपमा वृद्धि हुँदै आएको थियो । नेपाल पूर्ण रुपमा कच्चा पदार्थमा परनिर्भर हुँदा तेलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरुले प्रभावित बन्ने गरेको छ ।
यो पनि, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य मन्त्री कुल प्रसाद केसीले कोदालोले खनेको खड्डाबाट बिरुवा नहुर्किने बताएका छन् । कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका-८ मधुवनधामको आठौँ चुरे दिवसको अवसर वनका कर्मचारीलाई इङ्गित गदै सो कुरा बताएका हुन् ।
उनले प्रदेशका नदीको किनारालाई ब्याम्वो जोन बनाउने समेत बताए । प्रदेश भरीका समपूर्ण नदीनालाको दायाँ-बायाँ किनारमा बास रोपेर ब्याम्वो जोन बनाउने र ५ देखि १० वर्षभित्र स्थानीय निकायले बाँस निर्यात गर्ने उनले दाबी गरे । मुख्यमन्त्री केसीले बाँसको बीचमा अम्रिसो लगाउन समेत आग्रह गरेका छन् । यसरी वृक्षारोपण गर्दा तटबन्धको काम गर्ने र रोजगारी समेत सिर्जना हुने बताए । यो प्रदेश सरकारको योजना समेत रहेको स्पष्ट पारे । सो अवसरमा उनले वृक्षारोपण समेत गरेका थिए ।
खुल्यो ‘डिभी २०२३’ को नतिजा आउने, यसरी थाहा पाउनुहोस् डिभी परेको वा नपरेको – भिसा अक्टोबर १ देखि
अनुभवी र दक्ष चालक भएपनि यसरी भएको रहेछ तारा एयरको विमान दुर्घटना